Waa maxay sababta cunaha xanuunka iyo waxa laga yeelayo
Bogga horeCaafimaadka Barnaamijyo waxbarasho
Dareen xoqid aan fiicneyn oo kaa dhigaya inaad rabto inaad qufacdo, mid ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunka Cunaha / NHS. Waxay ula jeedaan in wax ka khaldan dhuunta.
Nasiib wanaag, tani guud ahaan aad khatar uma aha.
Xagee ka yimaadaa dhuun xanuun
Waa kuwan kuwa ugu badan oo aad ka heli karto cune xanuun markaad seexanayso daaqadaada oo furan? / Sababaha Clinic Clinic.
1. Waxaad neefsataa hawo engegan
Tani waxay dhacdaa gaar ahaan inta badan xilliga jiilaalka, marka daaqadaha ay xiran yihiin dhismaha iyo isla mar ahaantaana baytariyada ama kuleyliyeyaasha la shido. Xaaladahan oo kale, qoyaanka hawadu si degdeg ah ayuu hoos ugu dhacaa.
Xuubka xuubka dhuunta ayaa sidoo kale luminaya qoyaanka, habkani wuxuu isku dayaa inuu dareemo xanaaq yar oo ah Cunaha Xanuunka / Mayo Clinic, dareenka sida haddii cunaha uu xanuunayo.
Saamaynta la mid ah waxay dhacdaa haddii aad neefsato hawo engegan sabab kale, sida dhaxan ama qalalan, dabayl kulul.
2. Sigaar cab ama walxo kale oo xajiimo leh oo kugu xeeran
Cunaha xanuunka / Mayo Clinic waxay ka xoqi kartaa cunaha qiiqa tubaakada, qiiqa, qiiqa baabuurka, boodhka, urta kiimikooyinka, tusaale ahaan, warankiilo ama wax soo saar kale oo guriga ah. Mararka qaarkood xitaa udgoonka cadarka qof kale ayaa kaa xanaajin kara haddii aad u nugul tahay waxyaabaha ku jira.
3. Waxaad ka neefsanaysaa afkaaga
Tani waa hab kale oo si degdeg ah loo qalajiyo xuubka xabka. Hawada ka soo gasha afka, iyada oo aan lahayn qoyaan horudhac ah oo ku jira marinnada sanka, waxay deddejisaa uumiga qoyaanka ka soo baxa gudaha gudaha dhuunta.
Caadiyan, qofku wuxuu bilaabaa inuu afka ka neefsado laba sababood dartood:
Neefta ayaa ka baxday, tusaale ahaan, sababtoo ah aad buu u socday ama u ordayay. Xaaladdan oo kale, waxaan isku daynaa inaan qabsanno hawo badan oo suurtogal ah oo aan ku liqno afkayaga sidoo kale. Haddii hawadu isku mar qallajiso (aan nidhaahno waxaad ku soo guurtay qabow), dhididku aad buu u xoog badnaan karaa oo wuxuu keeni karaa weerar qufac qalalan.
Sanka oo wax ku ool ah. Tani waxay ku dhacdaa hargab ama xasaasiyad. Si kastaba ha ahaatee, xaaladahani waxay kicin karaan cune xanuun keligood.
4. Hargab baa kugu dhacay
Caadi ahaan, cudurada faafa ee SARS waxay qofka ku weeraraan marinka neefsiga (Neefsiga). Jidhkuna, si uu isu difaaco, waxa uu kordhiyaa wax-soo-saarka xab-xabeedka, sidaas awgeedna diifku wuu dhacaa.
Haddii xab badan la soo daayo, waxay bilaabataa inay ka daadato waxa loogu yeero dariiqa sanka ka dambeeya, ee ku yaal dhabarka hunguriga. Tani waxay ka xanaajin kartaa dhuunta waxayna sababi kartaa xoqid aan fiicnayn.
5. Waxaad tahay xasaasiyad
Tusaale ahaan, xilliyeed, manka. Ama xilli ka baxsan, boodhka, caaryada, caleenta xayawaanka.
Xaaladdan oo kale, walxaha xasaasiyadda, oo galaya habka neefsashada, waxay sababtaa xanaaq, taas oo muujinaysa lafteeda, oo ay ku jiraan dhuun xanuun.
6.Waxaad qabtaa laabjeex
Laab-jeex, xaalad ay waxa ku jira calooshu kor u kacaan hunguriga. Habkan waxa kale oo loo yaqaan reflux aashitada (dib-u-soo-celinta, dhaqdhaqaaqa dib u dhaca marka loo eego kuwa caadiga ah). Mararka qaarkood aad bay u xoog badan tahay in aashitada caloosha ay gaarto cunaha. Waxayna ka xanaajisaa gidaarkeeda, taasoo keenta dareen qaniinyo ah.
7. Waxaad qabtaa caabuq bakteeriya
Sinusitis, qumanka, laryngitis, iyo hababka kale ee bararka nasopharynx ee ay keento bakteeriyada (lamydia isku mid ah) waxay sidoo kale saameyn kartaa xaaladda cunaha. Inta badan way xanuunaysaa, laakiin xadgudubku wuxuu samayn karaa naftiisa iyo dareenka qallayl, dhididka.
Maxaa la sameeyaa haddii uu jiro dhuun xanuun
Caadi ahaan, waxaad ka takhalusi kartaa raaxo la'aanta hababka fudud. Waa kuwan Maxaad Cunuhu Kaga Qaadi Kartaa Hurdada Talo-bixinta Daaqaddaada? / Khabiiro Clinic oo ka socda Cleveland Clinic (USA):
Cab koob biyo ah, shaah, compote. Tani waxay qoyn doontaa cunahaaga waxayna guud ahaan kaa caawin doontaa inaad fuuqbaxdo.
Daar humidifier-ga. Ama dhig maro weyn oo qoyan korka hiitarka, ama dhig daasad biyo furan daaqadda. Kuwani waa siyaabo lagu soo celiyo jawiga gudaha sidii caadiga ahayd.
Qabow diirran. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa qoyaan xuubka xabka.
Ha ku neefsan afkaaga.
Haddii sankaagu xanniban yahay, isku day inaad dhibaatada ka saarto sida ugu dhakhsaha badan. Sidee, waxaan si faahfaahsan halkan ku qoray. Guud ahaan, isticmaal buufin sanka lagu buufiyo oo cusbo leh iyo dhibciyo vasoconstrictor haddii loo baahdo.
Haddii aad ka shakisan tahay in cune xanuunku uu noqon karo fal-celin qiiqa, hawo wasakhaysan, ama walxaha xasaasiyadda leh, u guuri hawo nadiif ah oo ku taal meel hawo fiican leh oo aan xanaaq lahayn.
Laakin haddii cunahaagu ay cunaha kaa xanuunayaan 2-3 toddobaad oo isku xigta, in kasta oo aad hawadu huwiso, ha neefsan qiiq oo waxaad ku dhowdahay inaad hubiso inaadan qabin hargab, xasaasiyad, iyo laabjeex, ama haddii dhididku weheliyo. qandho badan iyo cune xanuun, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarka. Bilawga, daaweeyaha. Wuxuu ku weydiin doonaa calaamadahaaga, qaab nololeedkaaga, hoos u fiiri cunahaaga, samee baaritaan. Waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo tixraac imtixaanada. Sida laga soo xigtay natiijooyinka baaritaanka, waxay ku talin doontaa sida looga takhaluso raaxo-darrada. Ama wuxuu kuu soo diri doonaa talo dheeraad ah oo uu u diro khabiir takhasus leh.
Maqaallo la mid ah
25 hacks nolosha oo isla markiiba hagaajiya muuqaalkaaga
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor inta aanad u dirin ilmahaaga dugsiga barafka: 8 talo oo loogu talagalay waalidiinta
8 cadaw ee quruxda oo ay tahay in gabadh walba ay ogaato
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waa maxay sababta cunaha xanuunka iyo waxa laga yeelayo!